★မြန်မာ့အလင်း★: ဖာသည်မဖင် နှင့် မွတ်ဆလင်
ဘာသာရေးဆိုတာ လူတွေကို လိမ္မာအောင် ဆုံးမသင်ကြားပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ဘာသာ တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ လူရမ်းကားဝါဒ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူရမ်းကားဝါဒကို တည်ထောင်တဲ့သူကတော့ မုဒိမ်းကောင် မိုဟာမက်ပါ။ မုဒိမ်းကောင်ရဲ့ အဖေတွေကတော့ ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး၊ ဟိန္ဒူနဲ့ Pagan တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး တွေရဲ့ ကျမ်းစာတွေကို ခိုးကူးပါတယ်။ ဟိန္ဒူ ဘုရားရှိခိုးပုံကို အတုယူပါတယ်။ Allah ဆိုတာ Pagan ဘာသာဝင်တွေ ကိုးကွယ်နေတဲ့ လနတ်သားရဲ့ အမည်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူနဲ့ Pagan တွေရဲ့မျိုးစေ့တွေပေါင်းပြီးမှ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ ရှင်းရှင်းလေးမြင်အောင် ဥပမာ ပေးရမယ်ဆိုရင် ဖာသည်မ ဖင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပေါ့။
ဖာသည်မရဲ့သားဆိုတော့ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတာ မဆန်းပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ မျက်ရည်ကျပြပြီး သူတို့အင်အားကောင်းလာရင် အင်မတန်ကို ရက်စက်ပါတယ်။လူရမ်းကားတွေဟာ သူတို့ လူရမ်းကားဝါဒကို ဝေဖန်ရင် အရမ်းကို ဒေါသထွက်ပါတယ်။ မိုဟာမက် သူ့သားမိန်းမကို နှာဘူးထတာ Quran မှာ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ ထုတ်ပြောတော့ သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးကို စော်ကားတယ်ဆိုပဲ။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အွန်လိုင်းမှာ မိုဟာမက်ကို ဝေဖန်ရင် အားလုံးက Quran နဲ့ hadith တွေကို ကိုးကားပြပါတယ်။ အဲလိုအထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ရေးတဲ့စာတွေကို တော့ မွတ်ဆလင်တွေက မှားနေတယ်ဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ ပလီဆရာတွေက မိုဟာမက်ဟာ ဘယ်လို ကောင်းပါတယ် စသဖြင့် အထောက်အထားမရှိပဲ ရေးထားတဲ့စကြတော့ သူတို့က မှန်တယ်ဆိုပဲ။ ကျနော်တို့ကိုလဲ ပလီဆရာတွေ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးထားတဲ့ စာတွေကိုပဲ ဖတ်ပြီးယုံစေချင်ပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်း ကျောင်းစာတွေက အရမ်းကိုများလို့ စာတင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အခုတော့ မုဒိမ်းကောင် မိုဟာမက်ရဲ့ ကာတွန်းလေးကိုပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မုဒိမ်းကောင် မိုဟာမက်ဟာ ကာတွန်းထဲမှာ ငပေါကြီးဖြစ်နေတော့ လုပ်ကြံရေးထားသလား ထင်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကာတွန်းဟာ ပလီဆရာတွေလို စိတ်ကူးယဉ်ရေးထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ မိုဟာမက်ကာတွန်း စာပိုဒ်တိုင်းမှာ Quran နဲ့ Hadith ကျမ်းအညွှန်းတွေနဲ့ ကိုးကားပြထားပါတယ်။ ဖာသည်မသား ၀ါဒကို တည်ထောင်တဲ့ မိုဟာမက် ဘယ်လောက် ငပေါဖြစ်လဲဆိုတာ ကာတွန်းဖတ်ရင်း ရယ်မောကြရအောင် ။ သြော် . . . . ရယ်မောရုံသက်သက် မပြီးပါနဲ့။ လက်တွေ့ကျကျ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ဖို့ စဉ်းစားပါဦး။ အကြံပြုချင်တာက မွတ်ဆလင်ကို လေ့လာပြီး သရော်တဲ့ ကဗျာလေးတွေနဲ့ ထိထိမိမိ လူရမ်းကားတွေကို ဒေါသထွက်အောင် လုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
eBook - Literature - Nationalist INFO - Mohammed's Believe It or Else! - Islam Comic Based on Quran and Had...
Publish at Scribd or explore others: Religion & Spiritual eBooks ebook literature
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 11:58 PM